KEDU KA ESI HỤ AKỤKỌ IHE MERE EME NKE VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Kedu ka esi hụ akụkọ ihe mere eme nke VKontakte
Usoro onyunyo vidiyo nwere ike ịdị mkpa maka ọtụtụ ihe, ma maka ụlọ ọrụ na maka onye ọ bụla. Akụkụ ikpeazụ bụ uru dị ukwuu ịhọrọ igwefoto IP: nkà na ụzụ a abụghị ọnụ ala ma ị nwere ike iji ya na-enweghị nkà ọ bụla. Dị ka omume na-egosi, ndị ọrụ nwere nsogbu n'oge mmalite nke ngwaọrụ ahụ, karịsịa mgbe ị na-eji router dị ka ụzọ isi ekwurịta okwu na kọmputa. Ya mere, n'isiokwu taa, anyị chọrọ ịgwa otu esi jikọọ igwefoto IP na netwọk netwọk.
Atụmatụ nke njikọ nke IP-ese foto na rawụta
Tupu anyị aga n'ihu nkọwa nke njikọ njikọ ahụ, anyị na-ahụ na iji hazie igwefoto na router, ị ga-achọ kọmpụta na njikọ Ịntanetị arụmọrụ. N'ezie, ọrụ nke ịtọlite ​​njikọ n'etiti ngwaọrụ onyunyo na onye na-ahụ maka redio nwere nkeji abụọ - nhazi igwefoto na nhazi redio, na n'usoro ahụ.
Nkeji 1: Ntọala igwefoto IP
Onye ọ bụla n'ime ese foto nke ụdị ndị a na-atụle nwere adreesị IP edozi, bụ nke a na-enye ohere maka ịchọta ihe. Otú ọ dị, ọ nweghị nke ngwaọrụ ndị a ga - arụ ọrụ site na igbe - eziokwu bụ na adreesị nke onye na - emepụta na - emekarị adịghị adaba na ebe adreesị nke netwọk gị. Esi edozi nsogbu a? Dị mfe - adreesị nke a kwesịrị ịgbanwe.
Tupu ịmalite nhazi, chọpụta ebe adreesị nke netwọk LAN. Banyere ebe ahụ, otu esi eme ya, akọwapụtara na ihe ndị na-esonụ.
Gụkwuo: Ijikọ na ịtọpụta netwọk mpaghara na Windows 7
Ọzọ ị ga-achọ ịmara adreesị nke igwefoto. Ozi a dị na akwụkwọ nke ngwaọrụ ahụ, nakwa na ihe nkwụnye na-etinye n'ahụ ya.
Tụkwasị na nke a, ngwaọrụ ahụ ga-enwe nrụnye nrụnye, nke, na mgbakwunye na ndị ọkwọ ụgbọala, nwekwara ọrụ nhazi - ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịchọpụta kpọmkwem adreesị IP nke igwefoto onyunyo. Site n'enyemaka nke ọrụ a, ị nwekwara ike ịgbanwe adreesị ahụ, mana e nwere ọtụtụ ụdị nke ngwanrọ dị otú ahụ, ya mere nkọwa nke otu esi arụ ọrụ a kwesịrị inwe isiokwu dị iche. Kama nke ọrụ ahụ, anyị ga-eji nhọrọ dịkwuo ọnụ - agbanwe agbanwe a chọrọ site na interface weebụ. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Jikọọ ngwaọrụ na kọmputa - tinye otu njedebe nke netwọk USB n'ime ọdụ ụgbọ mmiri na ngwaọrụ, ma nke ọzọ n'ime njikọ kwesịrị ekwesị na PC ma ọ bụ laptọọpụ kọntaktị. Maka igwefoto ikuku, o zuru ezu iji jide n'aka na netwọk Wi-Fi na-amata ngwaọrụ ahụ ma jikọọ na ya n'enweghị nsogbu.
Ịnweta ihuenyo weebụ igwefoto adịghị dị site na ndabara n'ihi ọdịiche dị na njikọ LAN njikọ na adreesị ngwaọrụ. Iji tinye ngwaọrụ nhazi netwọk kwesịrị ime otu ihe ahụ. Iji mezuo nke a, meghee "Network and Sharing Center". Mgbe ịpịrị nhọrọ ahụ "Ntọala ngbanwe mgbanwe".
Ọzọ, chọta ihe ahụ "Njikọ Njikọ Obodo" ma pịa ya na pịa nri. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ "Njirimara".
Na windo Njirimara, họrọ "TCP / IPv4" ma pịa bọtịnụ akaekpe aka ya abụọ.
Na-ezo aka adreesị nke igwefoto ahụ, nke anyị mụtara na mbụ - dịka ọmụmaatụ, ọ dị ka192.168.32.12. Nhọrọ abụọ dị na ya bụ subnet ọrụ nke igwefoto. Kọmputa nke ị jikọtara ngwaọrụ nwere ike ịnwe adreesị192.168.1.2ntre ke idaha oro "1" ga-edochi ya "32". N'ezie, ngwaọrụ gị nwere ike ịnwe nọmba ntinye dị iche iche, ọ ga-abanye. A ga - eme ka nọmba akara nke IP nke kọntaktị 2 dịka otu uru nke adreesị igwefoto - dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na nke ikpeazụ yiri192.168.32.12, adreesị nke kọmputa kwesịrị ịtọ ka192.168.32.10. Na paragraf "Ọnụ Ụzọ Isi" Adreesị nke igwefoto a ga-ahazi ga-adị. Echefula ichekwa ntọala.
Ugbu a, tinye nkwekọrịta nhazi igwefoto - mepee ihe ọ bụla nchọgharị, tinye adreesị ngwaọrụ na akara ma pịa Tinye. Window ga-apụta na-arịọ gị ịbanye nbanye na paswọọdụ, data dị mkpa nwere ike ịchọta na akwụkwọ nke igwefoto. Tinye ha ma tinye ngwa weebụ.
Ihe ndị ọzọ na-adabere ma ị ga-ele foto ahụ site na ngwaọrụ site na Ịntanetị, ma ọ bụ na netwọk mpaghara ga-ezu. Na ikpe ikpe a, lelee nhọrọ na ntọala netwọk "DCHP" (ma ọ bụ "IP di omimi").
Maka nhọrọ ịlele site na Ịntanetị ị ga-achọ ịtọ ntọala ndị a n'otu mpaghara ahụ.
Adreesị IP bụ isi nhọrọ. N'ebe a, ị ga-abanye adreesị nke igwefoto na uru nke nchịkọta isi nke njikọ LAN - dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na IP dị na ngwaọrụ ahụ yiri ya192.168.32.12mgbe ahụ, eriri "Adreesị IP" mkpa ịbanye ugbua192.168.1.12;
Ndepụta ntanetịime - dị nnọọ nkwụsị ndabara255.255.255.0;
Gateway - pasita adreesị IP nke onye rawụta ebe a. Ọ bụrụ na ị maghị ya, jiri ntuziaka na-esonụ:
Gụkwuo: Chọpụta adreesị IP nke router
Ntọala DNS - ebe ị chọrọ ịbanye adreesị nke kọmputa ahụ.
Echefula ichekwa ntọala.
Na ntanetị weebụ nke igwefoto, ịkwesịrị ikenye ọdụ ụgbọ mmiri. Dịka iwu, nhọrọ dị otú ahụ dị na ntọala netwọk dị elu. Na akara "Ọdụ ụgbọ mmiri HTTP" tinye uru ọ bụla karịa ndabara nke dị "80" - imaatu,8080.
Lezienụ anya! Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nhọrọ ndị kwekọrọ na njirimara nhazi, mgbe ahụ enweghi ike ịgbanwe ụgbọ mmiri na igwefoto gị, ị ga-awụlikwa nzọụkwụ a.
Kwupu ngwaọrụ site na komputa ma jikọọ ya na router. Mgbe ahụ laghachi azụ "Ụlọ Ahịa na Ntanetị"emeghe ihe "Njikọ Ebe Mpaghara" na ịtọ ntọala nke inweta IP na DNS dị ka "Akpaaka".
Nke a mejupụtara nhazi nke ihe nlekota oru - gaa n'ihu nhazi nke router. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ese foto, mgbe ahụ, a ga-emegharị usoro ahụ akọwapụtara n'elu maka onye nke ọ bụla na otu ihe dị iche - adreesị na ụkpụrụ ụgbọ mmiri maka onye ọ bụla ga-abụ otu karịa ngwaọrụ mbụ ahaziri.
Nkeji 2: Hazie onye rawụta
Configuring na rawụta maka arụmọrụ IP igwefoto dịtụ mfe. Mbụ, jide n'aka na onye ntinye redio jikọọ na kọmpụta na enwere ike ịntanetị. Dị ka ọ dị, ọ ga-adịkwa mkpa ịbanye na nhazi nhazi nhazi - n'okpuru ị ga-ahụ njikọ ntụziaka.
Esi tinye ASUS, D-Link, TP-Link, Tenda, Netis, ntọala router TRENDnet
Idozi nsogbu ahụ na ịbanye na nhazi ihe ntanetị
Ugbu a gaa n'ihu nhazi.
Mepee onye na-ahụ maka redire weebụ. Ọrụ anyị chọrọ maka ihe mgbaru ọsọ anyị ugbu a na-akpọ ọdụ ụgbọ mmiri na-ebugharị. A pụrụ ịkọwa akụkụ a na ụzọ dịgasị iche iche ma dị n'ebe dị iche iche. Dị ka a na-achị, n'ọtụtụ ngwaọrụ, a na-akpọ ya "Ntugharị Ụgbọ Mmiri" ma ọ bụ "Mebere Raara Onwe", ma dị ma ọ bụ na ngalaba nhazi dị iche ma ọ bụ na edemede "WAN", "NAT" ma ọ bụ ntọala dị elu.
Nke mbụ, a ga-arụ ọrụ a ma ọ bụrụ na ndabara anaghị akwado ya.
Ọzọ ịkwesịrị ịnye ihe nkesa na-eme n'ọdịnihu aha pụrụ iche - dịka ọmụmaatụ, "Igwefoto" ma ọ bụ "Camera_1". N'ezie, ị nwere ike ịkpọ dị ka ịchọrọ, enweghị ihe mgbochi ebe a.
Gbanwee nhọrọ "Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri" dabere ma ị gbanwere ọdụ ụgbọ mmiri nke njikọ igwe Igwefoto IP - na nke a, ịkwesịrị ịkọwa agbanwe. Na akara "Adreesị IP Obodo" Dee adreesị ngwaọrụ.
Ogologo "Port Obodo" dị ka8080ma ọ bụ hapụ80, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbanwe ọdụ ụgbọ mmiri na igwefoto. "Usoro" chọrọ ịhọrọ "TCP"ma ọ bụrụ na ejighị ya site na ndabara.
Echefula itinye mgbakwunye ihe nkesa ohuru ohuru na ndepụta ma tinye ntọala.
Maka igwefoto jikọtara, megharia ntughari ahụ, buru n'uche na adreesị IP na ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa maka ngwaọrụ ọ bụla.
Ka anyị kwuo okwu ole na ole banyere nhọrọ nke ijikọta na igwefoto site na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Maka njirimara a, jiri adreesị IP dị na router na / ma ọ bụ kọmputa, ma ọ bụ, mgbe mgbe, nhọrọ "DynamicDNS". Ọtụtụ ndị na-eme njem n'oge a nwere ihe a.
Usoro bụ ịdebanye aha gị onwe gị na ọrụ DDNS pụrụ iche, n'ihi nke ị ga - enwe njikọ dika// onwe- domain.address-provider-ddns. Ị ga-abanye aha ngalaba ahụ na ntọala nke onye rawụta ma banye onye na-ahụ maka ọrụ n'otu ebe ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, jiri njikọ ị nwere ike ịnweta interface igwefoto site na ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na Ịntanetị, bụrụ kọmputa, laptọọpụ, ma ọ bụ ọbụna ama. Ntuziaka zuru oke kwesịrị nkọwa dị iche iche, ya mere, anyị agaghị echebara ya echiche n'ụzọ zuru ezu.
Nke ahụ bụ ihe niile anyị chọrọ ịgwa gị banyere usoro maka ijikọ foto foto IP na router. Dịka ị nwere ike ịhụ, ọ na-ewe oge, mana ọ dịghị ihe na-agwụ ike na ya - na-agbaso ndụmọdụ ahụ a na-enye ntụziaka nke ọma.